Kadib Kulamadii Furitaanka Ee Premier League, Waa Sidee Miiska Kala Saraynta Iyo Kooxaha Ugu Sareeyaa? - Gool24.Net
Kadib Kulamadii Furitaanka Ee Premier League, Waa Sidee Miiska Kala Saraynta Iyo Kooxaha Ugu Sareeyaa?
Kulamadii furitaanka ee Premier league ayaa la soo gaba gabeeyay waxaana haddaba sii qaabaysmay miiska kala saraynta horyaalka Ingiriiska iyada oo kooxuhu u qaybsan yihiin saddex darajo, guul, guuldaro iyo barbaro.
Todoba kooxood ayaa guulo muhiim ah ku bilawday xili ciyaareedka cusub ee Premier league waxayna taasi la micno tahay in todoba kooxood oo kale ay guuldaro iyo murugo wayn ugu furteen xili ciyaareedka cusub.
Laakiin lix kooxood ayaa ku heshiiyay in ay barbaro galaan kuwaas oo ah darajada dhexe ee horyaalka Premier league ee u dhexeeya kooxaha guulaystay iyo kuwa guuldaradu la kulantay.
Kooxaha waa wayn ee Premier league ayaa inta badan guulo ku furtay marka laga reebo kooxda Chelsea oo noqotay kooxdii ugu horaysay ee lixda kooxood ee waa wayn ka mid ah oo guuldaro ku bilaabtay Premier league.
Manchester City oo labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysatay koobka Premier league ayaa haddaba la wareegtay hogaanka Premier League kadib markii ay 5 gool ku xasuuqeen kooxda West Ham.
Manchester United oo iyaduna afar gool ku xaaqday Chelsea ayaa kaalinta labaad kaga jirta miiska kala saraynta halka Liverpool oo 4-1 ku dubatay Norwich City ay kaalinta saddexaad ku fadhido.
Kooxda Brighton ayaa xaq u yeelatay in ay kaalinta afraad buuxiso halka Tottenham iyo Arsenal ay ku jiraan kaalmaha shanaad iyo lixaad sida ay u kala horeeyaan.
Halka kaga bogo miiska kala saraynta Premier League ee kadib kulamadii furitaanka xili ciyaareedka cusub.
Dhibic kasta oo laga shaqaysto Premier league waxay xili ciyaareedkan u muuqataa mid saamayn wayn yeelan doonta iyada oo hadadaba kooxaha Man City, Man United iyo Liverpool yihiin saddexda kooxood ee indhaha sida wayn u qabtay.